"The Corpse Bride" မှ 41 စာပိုဒ်တိုများ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Corpse Bride မှစာပိုဒ်တိုများ (၄၁)
Corpse Bride သည် Tim Burton ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကာတွန်းကားဖြစ်သော်လည်းကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ လူကြီးများလည်းကြိုက်နှစ်သက်သည့်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမြင်သောအခါ ပို၍ ပင်လူကြိုက်များသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများစွာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤထူးခြားသောရုပ်ရှင်အတွက်ကုန်သွယ်မှုများစွာသည်အလွန်စွဲဆောင်မှုရှိသည့်အပြင်၎င်းသည်အထူးသဖြင့်လှပသောရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ကို Stop motion ဖြင့်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်ကိုထုတ်လွှင့်ပြီး ၁၅ နှစ်နီးပါးကြာပေမယ့်၊ ဒီနေ့ကိုကြည့်ဖို့သင်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သင်အရင်ကမတွေ့ဖူးရင်တောင်အတူတူပဲကြိုက်မှာပါ။
ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသောစကားစုများ၊ အခြားသူများက ပို၍ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ရှိပြီး၊ဒါပေမယ့်မင်းတို့ပြောနိုင်တာကမင်းကရုပ်ရှင်ကိုမတွေ့ဖူးဘူး၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါကျတွေကိုဖတ်တယ်ဆိုရင်၊ ဒီရုပ်ရှင်ကိုထူးဆန်းတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းနဲ့အတူပျော်မွေ့နိုင်မှာကိုမြင်ချင်လိမ့်မယ်။
သင်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမြင်ဖူးပါကစာပိုဒ်တိုများကိုမှတ်မိပြီးမည်သည့်ဇာတ်ကောင်သည်ရုပ်ရှင်၌ပါသောစကားလုံးကိုပင်သင်သိနိုင်လိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်းကဒီရုပ်ရှင်ကိုကလေးတစ်ယောက်လောက်ပျော်မွေ့သွားမှာပါ။
မင်းရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဒီလက်နဲ့ငါကိုင်မယ်။ သင်၏စပျစ်ရည်ကိုငါမသောက်။ ဤဖယောင်းတိုင်ဖြင့်သင်၏လမ်းကိုမှောင်မိုက်၌လင်းစေလိမ့်မည်။ ဤလက်စွပ်ဖြင့်သင့်ကိုကျွန်ုပ်၏ဇနီးဖြစ်ရန်တောင်းဆိုသည်။
အဖြစ်လက်ထပ်ထိမ်းမြားနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိခဲ့သကဲ့သို့။ မင်းအဖေနဲ့ငါ "တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ချစ်တယ်" ထင်သလား။
သို့သော်ပထမ ဦး စွာအမ်မလီအဘို့, တစ် ဦး toast! အမြဲတမ်း bridesmaid, ဘယ်တော့မှသတို့သမီး။ ချစ်လှစွာသောနှလုံးသားကရိုက်နှက်မှုကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးနောက်နားထောင်နိုင်မလား။
အခြားသူတစ် ဦး ၏နားကိုအနည်းငယ်ခေါက်ပါ။
အိုးဘယ်လိုပြောင်းရွှေ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာအမြဲငိုတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ငါတို့ချစ်သူနှစ် ဦး ဟာနောက်ဆုံးမှာအတူတူပဲ။ ယခုသူတို့သည်ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်းတစ်စုံတစ်ခုကိုသူတို့မေ့နေကြသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါကဒီမှာအချည်းနှီးသောထွက်ခွာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်လျော်သောလမ်းအပေါ် corset ကြောင်းချည်ထားကြလော့။ မင်းကိုအခက်အခဲမရှိပြောတာကြားရတယ်
ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်, ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်။ ငါ့နာမည်ပေါလု၊ စားပွဲထိုးစားသူ။ မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုငါတာဝန်ယူမယ်။
ဗစ်တိုးရီးယား, စောင့်ပါ မင်းနားမလည်ဘူး။ သူမသေပြီ ကြည့်!
သငျသညျပြန်သွားချင်သည့်အခါသတိရပါ, "Hopscotch" ဟုပြောသည်။
ငါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ ငါ့အိပ်မက်တွေကိုငါ့ဆီကယူခဲ့တယ်။ ယခုမူကား၊ ငါသည်ယခုသူတစုံတယောက်ထံ၌ခိုးယူခဲ့သည်။ ဗစ်တာ၊ မင်းကိုငါချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းကငါမဟုတ်ဘူး။
ကြည့်ရှုပါ၊ မင်းဘာဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းနည်းပါတယ်။ ငါကူညီချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ငါတကယ်အိမ်ပြန်ဖို့လိုတယ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျားကအရမ်းကြင်နာတတ်တဲ့အိမ်ရှင်မပါ။ ဒါကြောင့်သတင်းဆိုးတွေကြားမှာငါ့ကိုနာကျင်စေတယ်။
ဒီမလျော်ကန်သောအရာကိုကဘာလဲ သင်နှစ် ဦး တည်းတစ်ယောက်တည်းမနေသင့်ပါ။ ဒီမှာငါးမိနစ်မတိုင်ခင်တစ်မိနစ်ပြီးပြီ။ သင်းအုပ်ဆရာ Galswell စောင့်နေသည်။ ချက်ချင်းလာ
နားထောင်၊ နားထောင်၊ ဗစ်တာဗန် Dort သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏လက်မောင်းတွင်တံတားပေါ်တွင်ယနေ့ညတွေ့ခဲ့သည်! အမည်းရောင် seductress နှင့်မာစတာဗန်ဒေါ့တ်သည်ညအချိန်တွင်မှေးမှိန်သွားသည်။
အမျိုးသမီးများ။ မင်းတို့သူတို့နဲ့အတူနေလို့မရဘူး၊ သူတို့မရှိဘဲနေလို့မရဘူး။
ငါငယ်ငယ်ကတည်းကငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အကြောင်းအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူကိုရှာဖို့အမြဲမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတူနေဖို့တစ်ယောက်ယောက်။ မိုက်မဲဟမ်?
မင်းက Miss Victoria ဖြစ်ရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူနှစ်ဆယ်ကျော်ကျော်လွန်ပြီးတစ်ရက်မပြဘူးလို့ပြောရမယ်။ အိုးဟုတ်တယ်အိုး။
သင်ထူးကဲစွာကစားသည်။ ကျွန်တော့်အမေကငါ့ကိုစန္ဒရားနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ မိန်းမငယ်လေးတစ် ဦး အတွက်တေးဂီတသည်မသင့်တော်ပါ။ "အရမ်းအသည်းအသန်" ဟုသူမကဆိုသည်။
အိုးအချစ်ရယ်။ ငါ့ကိုအဲဒီလိုမကြည့်ပါနဲ့ သေခြင်းတရားကငါတို့ကိုမခွဲမချင်းဒီသမဂ္ဂကိုသာခံရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့သင်ထင်ထားတာထက်ပိုမြန်လိမ့်မယ်။
အရာရာတိုင်းဟာအစီအစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲ Lord Barkis မဟုတ်လား။ ကောင်းပြီ, စိတ်ပျက်စရာအားဖြင့်ကျနော်တို့weုံကိုက်ညီနေကြသည်။
ဤလက်ဖြင့်သင့်ကိုငါညှဉ်းဆဲမည်။ ငါသည်လည်းသင်၏စပျစ်ရည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီဖယောင်းတိုင်နဲ့မင်းငါမင်းအမှောင်ထဲမှာမင်းလမ်းကိုငါလင်းပေးမယ် ဒီလက်စွပ်နဲ့မင်းကိုမင်းရဲ့သတ္တဝါဖြစ်ဖို့ငါတောင်းမယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးဗစ်တာပါ သူဟာအလောင်းတစ်ခု၊ သတို့သမီးလောင်းရဲ့အလောင်းကိုလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲဆိုတာကိုဖျက်သိမ်းမယ့်နည်းလမ်းရှိရမယ်။
လုံလောက်သော! စနစ်တကျပြင်ဆင်ထားသည်အထိဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲမကျင်းပနိုင်ပါ။ အချင်းလူပျို၊
ဂတိတော်အတိုင်းလည်း၊ မင်းငါ့ကိုလွတ်ပေးခဲ့တယ် အခုငါလည်းအလားတူလုပ်နိုင်တယ်။
ဤအရပ်မှထွက်သွားကြလော့။ သင်မှလာသည့်ပျက်ပြယ်မှပြန်လာပါ! သူတို့ကဒီမှာလာလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ နောက်ကျော, နောက်ကျော။
အကယ်၍ ဖယောင်းတိုင်မီးကိုကျွန်ုပ်ထိမိပါကနာကျင်မှုမရှိပါ။ ရေခဲသို့မဟုတ်နေနှင့်လည်းအလားတူပင်။ သို့သျောလညျး, ငါငါ့နှလုံးနာကျင်ခံစားရ; ၎င်းသည်မရိုက်သော်လည်း၎င်းသည်ကွဲလွဲနေပြီးကျွန်ုပ်ခံစားရသောနာကျင်မှုက၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောရန်ကြိုးစားသည်။ ငါသေပြီဆိုတာသိပေမယ့်ငါငိုနေတုန်းပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Corpse Bride မှစာပိုဒ်တိုများ (၄၁)
အမျိုးသား ၅၀ အကောင်းဆုံးစကားစု